Bhatiri bvunzo dzeiyo iPhone 13 Pro max inoratidza yakakura nguva | IPhone nhau
Imwe yezvinhu zvitsva izvo zvinounzwa nePhones nyowani kugona kwakanyanya mumabhatiri avo, uko, sezvakaziviswa muKeynote yekupedzisira, mhando dzePro dzaive nekuwedzera kukuru maererano nevakatangira, iyo iPhone 12. Kubva pavakatanga kusvika kuruzhinji ruzhinji nezuro mazuva mashoma pamberi pevose maYoutubers uye vane rombo rakanaka iyo Apple Tumira mamodheru ako. kuti iratidzwe, hapana mavhidhiyo mashoma atakaona eanobhokisi, bvunzo dzemakamera kana kuenzanisa kwemavara. Iye zvino mavhidhiyo ekushandiswa kwemidziyo ari kubuda zvakare uye Isu tatova neyekutanga bhatiri ongororo yeiyo iPhone 13.
Nezuro, Arun Maini akagovana vhidhiyo nyowani pane yake YouTube chiteshi, Mrwhosetheboss, un Bhatiri bvunzo yeese iPhone 13 mamodheru achienzanisa nguva yayo nechaji imwechete vs yekare mamodheru echigadzirwa. Arun anotsanangura kuti anga achiedza nguva dzose kuchengetedza marongero akafanana kuti aite bvunzo, uko maPhones akaedzwa aive nehuremu hwebhatiri huwandu hwe100% uye kupenya kwakafanana kusimba.
Kunyangwe chiri chokwadi kuti bvunzo idzi hadzisi yesainzi uye chaiyo bvunzo, Ivo vanotishandira kuti tizviratidze isu pachedu zvakanyanya nezve kugona kweiyo iPhone uye kugona kunzwisisa izvo zvinogona kutigarisa muhupenyu hwedu hwezuva nezuva.
Zvisingashamisi, uyo anokunda iyi "hondo" yehukuru hwepamusoro aive iyo iPhone 13 Pro Max, iyo yakaratidza hukuru hukuru nekutsungirira maawa mapfumbamwe nemaminetsi makumi mashanu nemaviri ebhatiri mukushandisa kusingaperi. Maini inoratidza kuti ndiyo bhatiri repamusoro soro iro raakakwanisa kuyedza muhupenyu hwake. Mhedzisiro yemuedzo yaive seinotevera:
iPhone 13 Pro Max: 9 maawa nemaminitsi 52
iPhone 13 Pro: 8 maawa uye 17 maminitsi
iPhone 13: 7 maawa uye 45 maminitsi
iPhone 13 mini: 6 maawa uye 26 maminitsi
iPhone 12: 5 maawa uye 54 maminitsi
iPhone 11: 4 maawa uye 20 maminitsi
iPhone SE 2020: 3 maawa uye 38 maminitsi
Iko kugona kweiyo iPhone 13 mini kunoshamisa kunyangwe iri diki kwazvo kupfuura hama dzayo dzechikuru, ichidarika kunyange iyo iPhone 12. Zvimwe zvakasarudzika hazvishamise, nenzira yakatetepa kubva kumaPro modhi, kusvika kumini uye pakupedzisira mamodheru apfuura zvakare komputa ne "zera".
Vane rombo rakanaka avo vatove neiyo nyowani iPhone vachange vachinakidzwa neakanakisa kugona iyo hazvizoiti kuti iwe udye plug (zvirinani) kwezuva rose uye kunyangwe zvishoma, zvinoenderana nekushandisa kwako. Kana iwe uchifunga kuti iyo Maini bvunzo yanga isina kunyatsoita uye bhatiri rako rinogara zvakanyanya kana kushoma pane zvarinoratidza, tisiyere zvako zvataurwa!
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 13 » IPhone 13 Pro bhatiri bvunzo inoratidza yakakura nguva yekumhanya
16 matsva emuchadenga screensavers ari kuuya kuTVOS 15